प्रश्न चोर्ने प्रहरी नक्कली परीक्षार्थी
एसईईको प्रश्नपत्र परीक्षाअघि नै सार्वजनिक गर्ने कार्यमा दुई प्रहरी जवान, एक शिक्षकसहित ६ जनाको संलग्नता देखिएको छ । विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ६ जनालाई नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
एसईई परीक्षको प्रश्नपत्र आउट गर्ने कार्यमा संलग्न दुई प्रहरी, एक शिक्षकसहित ६ जना आरोपीलाई सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनीहरुलाई बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
एसईईको प्रश्नपत्र आउट गर्ने अभियुक्त आज सार्वजनिक गरिँदै
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा(एसईई) को परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिर्‍याउने अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले बिहीबार सार्वजनिक गर्दैछ ।
रद्द र स्थगित गरिएको प्रदेश २ को एसईई परीक्षा चैत २२ देखि २९ गतेसम्म हुने
प्रदेश २ को रद्द र स्थगित गरिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षा चैत २२ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्डको आज बिहान बसको बैठकले २२ देखि २९ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश २ को स्थगित एसईई चैतभित्रै
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैतभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश २ को एसईई परीक्षाको तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश २ मा स्थगित र रद्द भएका परीक्षा चैत महिनाभित्रै हुने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
गणित विषयमा त्रुटि नै त्रुटि
एसईई अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा अनिवार्य गणित विषयमा थुप्रै त्रुटि रहेको पाइएको छ । गणित शिक्षा परिषद् कास्कीले प्रश्नपत्रमा ८ वटा त्रुटि रहेको भन्दै यसले परीक्षार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको जनाएको छ । गणित विषयको परीक्षा गत बुधवार भएको थियो ।
एसईई प्रकरण : तस्बिरमा जितपुरको झडप
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रद्द गरिएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रेका परीक्षार्थी र प्रहरीबीच शनिबार झडप भएको छ । वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डको जितपुर बजारमा परीक्षार्थीले गरेको राजमार्ग अवरुद्धलाई खुलाउन खोज्ने क्रममा सडकको भीडलाई तितरबितर पार्दा परीक्षार्थीहरुले ढंगामुढा गर्न थालेपछि झडप भएको हो ।
एसईई : बाराको जितपुरमा परीक्षार्थी र प्रहरीबीच झडप
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रद्द गरिएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रेका परीक्षार्थी र प्रहरीबीच शनिबार झडप भएको छ । वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डको जितपुर बजारमा परीक्षार्थीले गरेको राजमार्ग अवरुद्धलाई खुलाउन खोज्ने क्रममा सडकको भीडलाई तितरबितर पार्दा परीक्षार्थीहरुले ढंगामुढा गर्न थालेपछि झडप भएको हो । झडपले स्थिती तनावपूर्ण भएपछि नियन्त्रणको लागि प्रहरीले दर्जन सेल अश्रु ग्यास र हवाइ फायर गरेको छ ।
परिक्षा रद्दभएपछि रौतहटमा पनि विद्यार्थी आन्दोलित
परिक्षा सुरु हुनु अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएर परिक्षा रद्द भएपछि जिल्लाका अधिकांश परिक्षाकेन्द्रका विद्यार्थीहरु आन्दोलीत भएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार बिहान पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चच्काजाम गरेर विरोध जनाएका थिए । विद्यार्थीले सरकार विरोधी नारा लगाउँदै परिक्षा दिन नपाएको झोंकमा चक्काजाम गरेका हुन् ।
एसईई परीक्षा रद्द : शिक्षा मन्त्रालयले आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठक डाक्यो
एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक डाकेको छ ।
परीक्षा रद्दको विरुद्धमा प्रदर्शन
प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि परीक्षा र रद्द र स्थगित विरोधमा बारा कलैयामा शुक्रबार बिहानैदेखि परीक्षार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकटका नेविसंघ, संघीय समाजवादी फोरमका विद्यार्थी संगठनलगायतको सहयोगमा परीक्षार्थीहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोध प्रदर्शनलाई शान्त बनाउन सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
एसईई परीक्षा रद्द : वीरगन्जमा के भइरहेको छ? [भिडियो]
प्रदेश २ को ८ वटा जिल्लामा शुक्रबार नियमिततर्फको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षा रद्द भएपछि वीरगञ्जका परीक्षार्थी आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले 'हामीलाई न्याय चाहियो' भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
एसईई परीक्षा रद्दले निराश छन् परीक्षार्थी
प्रश्नपत्र बाहिरिने शृंखला चलेपछि प्रदेश २ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भाँडिएको छ । यो शृंखला चलेपछि परीक्षार्थीसहित परीक्षा समन्वय समितिका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायसहित सरोकारवालाहरु तनावमा छन् । परीक्षा व्यवस्थापन फितलो भएपछि उनीहरु तनाव खेप्न बाध्य भएका हुन् । कसले र कुन ठाउँबाट प्रश्नपत्र बाहिरिइरहेको छ भने सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
भुषण यादवसन्तोष सिंह
प्रदेश २ मा एसईई परीक्षा रद्द, कसले गर्छ प्रश्नपत्र आउट ?
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा १२ घण्टा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा शुक्रबारको सामाजिक विषयको परीक्षा पनि रद्द गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रश्नपत्र छ्यापछ्याप्ती भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश २ मा बिहीबार एसईई विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द गरिएको छ । बिहान ८ बजे परीक्षा सुरु हुनुअघि नै सप्तरीका विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र ‘सेयर’ गरिसकेका थिए । लगत्तै जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति बैठकले परीक्षा रद्द गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो ।
एसईई : प्रदेश २ को समाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पुष्टि, आजको परीक्षा रद्द
एसईई परीक्षामा प्रदेश २ को समाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पुष्टि भएको छ । बिहीबार रातिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नपत्र भाइरल भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आकस्मिक बोर्ड बैठक डाकेको थियो । बोर्डले साढे ७ बजे प्रदेश २ को सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र खोलेर हेरेपछि प्रश्न पत्र आउट भएको पुष्टि गरेको थियो ।
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका १ कुइकाकी कल्पना रिमाल चैत १० बाट सुरु एसईई परीक्षा दिन ८ गते नै घरबाट निस्किइन् । सदरमुकामस्थित विद्या मन्दिर मावि विनायकको परीक्षा केन्द्र परेको छ । बिरानो ठाउँ गएर परीक्षा दिँदा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने डरले उनलाई सताएको थियो । अर्कोतिर बाहिर डेरा गरेर बस्नुपर्ने भएकाले खर्चको समस्या उस्तै थियो ।
हुम्लामा हिमपात, एसईई परीक्षार्थीलाई समस्या
यहाँ चैतको दोस्रो साता पुनः हिमपात भएको छ । जिल्लामा पुस, माघ, फागुनमा लगातार हिमपात भएको थियो । चैतको दोस्रो साता हिमपात हुँदा एसईई परीक्षार्थीलाई समस्या भएको छ ।
विद्यार्थीलाई चिट दिन परीक्षा निरीक्षककै सक्रियता देखिएको छ । परीक्षा अमर्यादित बनाएको भन्दै सप्तरीबाट सोमबार मात्रै ५ निरीक्षक निष्कासनमा परे । सर्लाहीको लालबन्दी केन्द्रबाट पनि एक निरीक्षक निष्कासित भए । चिट बोकेर केन्द्रमै पुग्ने अभिभावकको भीड भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा कमी छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ७ वटै प्रदेशका अंग्रेजी र नेपाली विषयका प्रश्नपत्रमा गल्ती र अस्पष्टता भेटिएको हो ।
आगामी आइतबारदेखि हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा परीक्षार्थी र शिक्षकलाई लमजुङमा विद्यालय पोसाक अनिवार्य गरिएको छ ।
एसईईको तयारी पूरा
चैत १० बाट हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षदेखि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा हुँदै छ ।